The Laver Association an'ny faritany Jiangsu-Enterprise News-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Ny Fikambanana Laver ao amin'ny Faritany Jiangsu
Fotoana: 2017-10-18 Hits: 109
Ny fikambanana Laver Association an'ny faritanin'i Jiangsu dia natsangana tao Nanjing tamin'ny 15 feb 2003. Izy io no fikambanana laver sivily sy faritany voalohany ao Shina. Izy io dia mikendry ny hanatsara ny mari-pahaizana momba ny fampandrosoana ny orinasa.
Tamin'ny 16 Oktobra 2017, nanatrika ny fivorian'ny fikambanana laver ny mpitantana anay. Fantatsika tamin'ilay fivoriana fa ahidratsy sy arivo sy iray alina sy iray hetsy ny baoritra maina niditra ny tsena ny volana des, 2016 ka hatramin'ny apr. 2017. Ary ny habetsahan'ny varotra dia telonjato sy sivinjato sy dimy arivo sy dimy alina. Ny tahan'ny taham-pivoarany dia 73 isan-jato. Ny salanisa teo ho eo dia ny vidin'ny € 68.92 / 100.
Raha ampitahaina amin'ny tsena tamin'ny Jan, 2016, ny ahidrano maina niditra ny tsena dia nihena carton fito alina sy iray hetsy. Ny volan'ny varotra dia nihena ho enin-jato amby arivo sy enina sy eninjato sy roanjato. Na izany aza, nitombo 17% ny salan'isa eo amin'ny tsena.
Taloha: Ny tombontsoa azo amin'ny vinaingitra
Next: Nantong Qianhui Trading Co, Ltd. napetraka amin'ny fomba ofisialy